Heterocycles - kuwa wax iibsada ee APICMO CDMO
Heterocycles ayaa ku dhex jira dabeecadda, iyadoo la adeegsanayo warshadaha casriga ah, iyo dhammaan qaybaha nolosheena. In dabiiciga ah ay ka dhacaan qaabab kala duwan, oo weliba waxay hantiyi muhiimadda lagmamaarmaanna u weyn - "ee u taagoo ee nolosha." The codsiyada of heterocycles in ay yihiin barbaro ka chemistry, bayoolaji, daawo, beeraha, warshadaha iyo waxaa ciidan.
xarunta ama giraan-dhismeedka A heterocyclic waa xarunta a xilliile ah in uu leeyahay atamka ugu yaraan laba qaybaha kala duwan sida xubno ka mid ah ay giraanta (s) .Heterocyclic chemistry waa laan ka mid ah chemistry organic qabashada ee Avv, guryaha, iyo codsiyada of heterocycles kuwan.
Tusaalooyinka xeryahooda heterocyclic ka mid ah oo dhan oo ka mid ah acids nucleic, inta badan ee dawooyinka, dabdhaliyayaasha ugu (cellulose iyo qalabka la xiriira), iyo formaldehyde dabiiciga ah iyo isku dardaro badan
Muujinaya 1-12 of 21 natiijooyinka